Ọkpụkpụ radiators: otu esi eme ya na otu esi eme ya na ihe ọ bụ maka | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Oge ga-abịa mgbe igwe radiators gị agaghị ekpocha ọkụ dịka ha mere na mbido. Nke a nwere ike ime ebe ikuku na-akwakọba n'ime sistemụ kpo oku dum wee malite igbochi nrugharị mmiri nke bụ maka ikpo ọkụ radiators. Iji dozie nsogbu a, ị ga-amụta ọbara radiators. Nke a bụ igbochi radiator na-ewepụta okpomọkụ n'ụzọ dị iche iche. A na-atụkarị aro ya tupu oge oyi ọ bụla na-agbapụta radiators iji zere nsogbu a.
N'ihi nke a, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị otu esi ekpochapụ radiators na ihe dị mkpa na ya.
1 Mkpa nke radiators na-agba ọbara
2 Mgbe na otu esi agba ọbara radiators
3 Akpaka valves na haịdrọlik guzozie
Mkpa nke radiators na-agba ọbara
Dị ka anyị kwuru na mmalite nke isiokwu ahụ, ọ ga-ekwe omume na ndị radiators na-amalite ịchịkọta ikuku ma na-egbochi mgbasa nke mmiri nke na-eme ka radiators na-ekpo ọkụ. Nke a na - akpata na ọ naghị ewepụta okpomọkụ ọfụma, ya mere ọ ga - adị mma ibido radiators na - agba ọbara. Ime nke a bụ tumadi iwepu ikuku nke bụ ọrụ nke igwe eletrik niile. N'ụzọ dị otú a, ọ na-achịkwa iji melite arụmọrụ ike nke nrụnye kpo oku ma melite oriri eletrik.
Ike ume na-abawanye na ntinye kpo oku na Mbelata ụda ndị ọzọ. Ọ na-adịkarị mgbe ikuku ikuku chịkọbara site na sistemụ kpo oku ịnụ mkpọtụ dị iche iche mgbe ị na-agbanye ọkụ. A na-anụkarị mkpọtụ ndị a dị ka ụda olu na-ada ada site na ikuku ikuku a chịkọbara n'ime usoro kpo oku. Nke a bụ ihe nrịba ama na na-egosi na ọ dị mkpa ka ọgbụgba radiators tupu oge ikpo oku amalite.
Mgbe radiator malitere ịmịpụtaghị nke ọma, thermostat adịghị awụlikwa elu mana okwute ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ. Nke a na - eme n'ihi na ọnweghị ike iru ọnọdụ okpomọkụ enyere. Nke a na - eme ka igwe mmiri ọkụ ahụ rụọ ọrụ okpukpu abụọ ma na - akpata ike dị elu karịa usoro kpo oku anaghị arụ ọrụ nke ọma. N'okwu ndị a, ọ dị mkpa ijide n'aka na nrụnye ọkụ anyị na-arụ ọrụ nke ọma. Usoro kpo oku nke oma na-egbochi imefusi ike na-azoputa otutu oriri.
Mgbe na otu esi agba ọbara radiators
Oge kachasị mma iji kpoo radiator bụ Septemba na Ọktọba, tupu mmalite nke oge kpo oku siri ike. Ọ dị ezigbo mma na anyị kwesịrị ikpo ya n'echeghị ka ọnọdụ okpomọkụ daa, n'ihi na ọ bụrụ na anyị ehichabeghị ya mbụ, ọ ga-eji "ọkara gas" rụọ ọrụ., si otú a na-efu ike na ego. Ka anyị lee ihe ndị a ga-eme iji mụta otu esi agba ọbara radiators. Ọ bụ usoro dịtụ mfe ma ị ga - agbaso ndụmọdụ ndị a:
Lelee ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba ọbara radiators gị: Iji mee nke a, ị ga-agbanye ọkụ ma nyefee aka gị n'elu elu. Ọ bụrụ na akụkụ a dị oyi karịa nke dị ala, ọ pụtara na enwere ikuku nke ga-arịrị elu na ọ na-egbochi sekit ahụ.
Have ga-amalite site na igwe okpomọkụ dị nso na igwe oku. Omume niile na-amalite site na igwe radiator a nke dịdebere mmiri ọkụ ahụ ebe ọ bụ na a ga-agbaso usoro mmiri sitere na mmiri.
Debe akpa n'okpuru nkwụsị: ọ kachasị mma ịhọrọ otu iko mmiri ma debe ya n'okpuru mgbata. Nke a bụ otu anyị nwere ike isi gbochie ala ịsa mmiri mgbe mmiri malitere ịpụ.
Igodo tụgharịrị na a sikruuokwomoto: A pụkwara iji mkpụrụ ego mepee valvụ. Na mbụ ikuku nke na-apụta ozugbo anyị meghere pọmpụ ahụ na-esi isi. Site na ebe a, anyị nwekwara ike ịhụ ụfọdụ mmiri sitere na jet ka agaghị edo edo.
A ga-emechi pọmpụ ahụ mgbe jet dị mmiri mmiri: Mgbe ugbo elu mmiri na-apụta kpamkpam mmiri na homogeneous, anyị ga-emechi pọmpụ ahụ, ebe ọ ga-apụta na ikuku apụtaworị, yabụ anyị ga-emechi pọmpụ ahụ na ntụgharị ihu.
A ghaghị imegharị ọrụ ahụ maka radiators niile: Cheta na ọ dị mkpa ịgbaso radiator site na radiator nke mmiri na-asọpụta n'ụzọ nkịtị. Ọ bụrụ na-agabiga nke ọ bụla n'ime radiators, ọ dịghị mkpa ịrụ ọrụ ahụ.
N'ikpeazụ, ọ dị mfe ịlele nrụgide nke esi mmiri ọkụ. Ọ ga-adị na ụkpụrụ nke 1-1.5 mmanya ebe ọ bụ na mgbe ịsachachara nrụgide nrụgide na-ada. Ọ dị mkpa na ọkwa nrụgide dị na ọkwa ndị a.
Ọ bụrụ na ịchọghị ịrụ ọrụ ndị a niile n'onwe gị ma ọ bụ naanị gị, ị nwere ike ịkpọ onye ọkachamara na-arụ ọrụ yana nwekwara ike ilekọta ịchacha usoro radiator dum ma hapụ ya maka oge ọkụ dị elu.
Akpaka valves na haịdrọlik guzozie
Usoro kpo oku nke oge a nwere ike ịnwe valvụ akpaka na usoro ikpochapu akpaka. Ofdị valvụ a na-ewepụta ikuku na-akpaghị aka, yabụ na ọ dịghị mkpa iji aka ya gbapụ ya. Ọ bụrụgodi na ụdị valvụ ndị a, ị chọpụtala na radiator anaghị ekpo ọkụ nke ọma, maka ebumnuche nchekwa, ọ kachasị mma ịkpọtụrụ ọkachamara iji nyochaa usoro ahụ.
Mgbe radiator adịghị 100% kpụ ọkụ n'ọnụ, ọ pụtara na usoro kpo oku enweghị ike ịrụ ọrụ nke ọma, nke na-akpata ume na-enweghị isi. Usoro kpo oku nke oma nwere ike izere igbusi ike ma ya mere chebe ike. Na mgbakwunye na ihicha ndị radiators, enwere ike ịme ihe ndị ọzọ iji nweta ọrụ kachasị mma site na radiators ndị a.
Mgbe anyị na-ekwu maka nrụnye etiti etiti, enwere mmemme nke enwere ike ime ngwa ngwa iji hụ na ndị radiators niile nwetara mmiri dị mkpa maka ọrụ ha, a na-akpọ nke a edozi hydraulic. Nke a bụ usoro nke ndị nrụpụta teknụzụ ruru eru ga-arụ, ma ọ bụghị na nsogbu dị iche iche nwere ike ịme n'oge usoro nrụnye.
Enwere ọtụtụ uru dị na njikwa hydraulic:
N'otu aka, ọ na-enye ohere mmiri zuru ezu iji ruo radiators niile.
Nweta valves thermostatic iji dozie ọnọdụ okpomọkụ
N'ikpeazụ, nhazi hydraulic ziri ezi nwere ike izere mkpọtụ na-akpasu iwe n'oge nrụnye.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere otu esi eme ya na mgbe ị ga-agba ọbara radiators.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Omenala ulo » Ọbara radiators
Ihe ndị na-akpata mmetọ